Waa hage cusub oo loo shaqeeyeyaasha ah. Wasaaradda Shaqada ayaa dhajisay Isniinta, Sebtember 7 a hab maamuuska qaranka si loo hubiyo caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha ee wajahaya cudurka 'Covid-19' ee faafa, kaas oo badalaya borotokoolkii qeexida qaran. Dukumiintigaan wuxuu shaqeynayay ilaa Sebtember 1. Waxay ka hadlaysaa mowduucyo kala duwan.
Meelaha isku dhafan ee wadajirka ah
Xirashada maaskaro waa ku qasab shirkadaha ku jira meelaha wadajirka ah ee xiran. Si kastaba ha noqotee, borotokoolku wuxuu dejiyaa waxyaabo ka reeban mabda '.
Dabeecadda qaar ka mid ah meheradaha ayaa xirashada maaskaro aan la jaan qaadi karin
Qofka shaqaalaha ah ee jooga goobtiisa shaqada wuxuu xaq u yeelan karaa inuu maaskaradiisa dhigo wakhtiyo gaar ah oo ka mid ah maalinta shaqada oo uu sii wado hawshiisa. Laakiin waa wax aan macquul aheyn inaad iska bixiso maaskaradaada maalintii oo dhan ...
Muxuu borotokoolka caafimaadka ka bixiyaa shirkadaha? July 10th, 2021Tranquillus
READ Aasaaska suuqgeynta internetka
horeXirfadaha Grand Paris ayaa muujinaya
socdaDib-u-habeyn iyo caddaalad: "Maxkamadaha dhexdiisa, PCA-yada (...) lama dhaqaajin doono"